Gay Pride - Gay Shop
Chero chipi zvacho chauri kutsvaga kuratidza kuzvikudza kwako tine kuGay.shop. Isu tinotengesa pamusoro pezvinhu zvakatarisa kubva paWarbow flags, Gay Pride Jewelry, Gay Kudada Fans, Gay Kudada zvipfeko chero zviitiko zvatiinazvo mune zvayo muhukuru hwako.
Mukadzi wokutanga weGay unozvikudza wakatevera mushure mekuyeuka kweRwwwall mhirizhonga musi waJune 28th 1970 kuratidza kufambira mberi pakurwisana nevekudzivirira vanhu vachigadzira nguva yakaitika. Isu tinowanzonzwa New York ichitaura kuti iri "nyika" yeGays sezvo ndiyo iyo kusunungurwa kunotanga kutonga. Nhasi Gayidada ruremekedzo uyewo mamiriro ezvematongerwo enyika ekugadzira kuziva kwekuderera asi asiri kuve nehutano husina kunaka hwevanhu vanotarisana nevemunharaunda yedu nechinangwa chekuderedza kudengenyeka kwenyika kusvika pakuvepo.
Pasinei nokuti uri kutenderera mumigwagwa pamwe chete nevakoti vako, kana kupa zvinyararire zvese zvishoma zvingabatsira. 5% yekutengesa kwose kuburikidza neGay.shop inopiwa kumasangano ekubatsira vanoita gay pasi pose kuitira kuti isu tigone kupa zvose zvatinogona. Asi iwe Gay kudada zvinhu, zvipfeko, kana chiyeuchidzo uye uzvirumbidze!
Zvibata iwe zvino uye utengese isu Gay Pride Collection.